mangatsiaka sakafo velona velona - Hiroborobo Best mandry maina Sakafo
mangatsiaka sakafo velona velona
Leave a Comment	/ Fitehirizana sakafo vonjy taitra / By Admin
Mety misy fotoana tsy maintsy hijanonana mandritra ny fotoana fohy. Ao anatin'izany toe-javatra izany, ianao dia te-hanana sakafo miaraka aminao haharitra amin'ireo andro ireo rehefa lavitra ny trano ianao. mazava ho, tsy ho afaka hitondra sakafo masaka miaraka aminao ianao ary eto no mipoitra ny maha-zava-dehibe ny fitehirizana sakafo ara-dalàna. sakafo izay manana fiainana talantalana lava ary novidiana mba hotehirizina ho sakafo maika.
Safidy iray amin'ireo karazan-tsakafo ireo ny maina-maina. Ireo karazan-tsakafo ireo dia mandalo dingana iray mba hanala moramora ny rano ao anatiny. Ity fanesorana moramora ny atin'ny rano ity dia miantoka fa ny ankamaroan'ny otrikaina sy vitamina dia mijanona ho tsy mitongilana. Matetika, asio rano kely fotsiny dia avelao hipetraka eo izy 10 minitra aorian'ny fikororohana azy tsara.
Ity karazan-tsakafo ity koa dia maharitra ela be ary ny sasany azo tehirizina hatramin'ny 25 taona na mihoatra. Mazava ho azy fa midika izany fa tsy mila manolo azy ireo matetika ianao alohan'ny datin'ny fahataperan'izy ireo ary manangona vola any aoriana any.
Amin'ny fiainana miroborobo, ohatra, ny isan-karazany ny sakafo maina-maina dia tsy mitovy, manomboka amin'ny henan'omby sy voankazo ka hatrany amin'ny tsindrin-tsakafo matsiro toy ny cheesecakes.
Maina-maina – anisan'izany ny legioma manta, lasopy sy laoka afangaro, vokatra vita amin'ny ronono isan-karazany – foto-tsakafatra iray malaza ho an'ny fitazonana sakafo maina.
Fanindroany, ity zava-misy ity dia hita ho loharanom-pifaliana falifaly ho an'ireo olona izay manambany ny fahendrena amin'ny fananganana famatsiana vonjy maika; manampy an-tsaina ireo teny maneso ireo mandositra ny vava misavoana izay matetika feno lovia haingam-pandeha vita amin'ny zavatra mitovy amin'ny tahirin'ny "mpanomana" betsaka.
Noho izany, toa, ny ‘hafahafa’ amin'ny fitehirizana sakafo maina dia mitoetra ao anatin'ny fotoana tiana kokoa: ny olona mampihatra fahaiza-miaina dia manemotra ny fahafaham-po, fampiasam-bola amin'ny sakafo hohanin'izy ireo amin'ny ho avy, raha mandany vola kosa ireo mpanaratsy azy ireo – nindrana be – amin'ny sakafo "mora", mihinana izy ireo izao ary mandoa avy eo. Mety ho izany “mangatsiatsiaka”, fa azo antoka fa tsy marani-tsaina izany.
Ankoatry ny faniriana ho faty ratsy na ny filan'ny nofo mangidy, maninona no misy olona manararaotra fotoana hahazoana sakafo tahiry fitehirizana?
Ahoana izao ny fomba handrafetanao ny fitahirizanao sakafo
Drafitra fitahirizana sakafo vonjy maika
Ireto misy drafitra vitsivitsy hanampiana anao sy ny fianakavianao handrafetana programa fitahirizana sakafo mandritra ny fotoana tsy eo.
Atombohy amin'ny a 72 Kit ny sakafo vonjy maika sy 7 Sehatra fisakafoanana antoandro an'ny Mountain House Freeze Kitapo sakafo maina ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviana ao an-tranonao. Tehirizo ao anaty toerana mangatsiatsiaka foana ny rano fanampiny miaraka aminy, raha azo atao.
Manaova programa fitahirizana sakafo vonjy maika ho anao sy ny fianakavianao 3 ny 6 volana maro ao an-tranonao. Afaka mahazo karazana fanombohana marobe ianao, legioma sy tsindrin-tsakafo miaraka amin'ny Thrive life Sakafo maina-maina, izay manana fiainana talantalana 7 ny 30 taona. Miroborobo ny sakafo azo avy amin'ny fiainana dia mora miomana amin'ny rano mafana na mangatsiaka ary sakafo matsiro matsiro matsiro indrindra eny an-tsena.
Manaova programa fitahirizana vonjy taitra maharitra ho anao sy ny fianakavianao 1 ny 2 taona, fa lava kokoa raha zakanao. Mitahiry olona sasany 3 ny 5 an-taonan'ny sakafo maina maina. Miroborobo amin'ny fiainana Freeze Dried Foods dia tsara amin'izany, satria manana fiainana talantalana izy ireo 25-30 taona. Azonao atao ao anaty fonosana fitahirizana sakafo efa nomanina izany, mitsitsy fotoana sy vola! Ampirisihina ianao hitahiry ireo sakafo ireo amin'ny toerana mangatsiaka ao an-tranonao, toy ny garazy, ambany rihana, na lakaly, raha misy.
Manana roa farafahakeliny 72 Kitapo fisakafoanana vonjy maika ao anaty kitapo ao anaty fiaranao na kamio misy rano be raha sendra olana tampoka miaraka amin'ny fiaranao.
Ity lisitra ity dia mety 5 fotoana lava miaraka amin'ireo entana fanampiny rehetra hanomanana anao amin'ny fiomanana vonjy maika, fa ny zavatra tena ilaina atomboka dia ny sakafo maina maina (Miroborobo ny sakafo fiainana dia safidy lehibe) sy ny rano madio.
Maninona no mandeha miaina fiainana?
Ilaina hatrany ny mandinika ny fitehirizana ireo sakafo maina-maina izay manana fiainana lava talantalana. Araka ny hevitray, Miroborobo amin'ny fiainana Freeze Dried Food no tsara indrindra ary izao no antony:
Ny fizotran'ny fanamainana mangatsiaka ampiasaina amin'ny famoronana sakafo maina-maina amin'ny fiainana miroborobo dia mitahiry ny kalitao tsara indrindra amin'ny sakafo. Ny zava-dehibe indrindra, mitazona ny anzima voajanahary ao anaty sakafo izy io, mba hihinananao sakafo ara-pahasalamana. Ny sakafo ihany koa dia azo antoka fa hanandrana tsara rehefa avy eo 30 taona.
Miroborobo amin'ny sakafo maina maina ny fiainana dia vita amin'ny akora mitovy amin'ny sakafo an-trano, fa raiso ihany 10 minitra hanomanana. Ny sakafo maina-maina dia noforonina amin'ny fampiasana dingana telo lehibe.
VOALOHANY, mividy akora tsara kalitao izy ireo. Faharoa, ny fitaovan'ny fanamainana mangatsiaka ny sakafo misy tombony samy hafa, satria manome tsiro ny sakafonao, jereo ary tazomy hatrany, milanja kely kokoa, ary mitazona otrikaina bebe kokoa. Ary fahatelo, ny fizotran'ny fandrahoan-tsakafo dia mahatonga ny sakafo maina ho an'ny an-trano hatao sakafo mangatsiaka, iray amin'ireo orinasa nahandro ny fahandroan'izy ireo vaovao alohan'ny fanamainana mangatsiaka. Ny sasany manangona fotsiny ireo singa maina maina ao anaty fonosana.
Miroborobo amin'ny fiainana maina-maina dia tokony tehirizina amin'ny toe-pahadiovana sy maina, tsy misy fiatraikany amin'ny hafanana tafahoatra sy ny fisorohana ny tontolo iainana mety hanimba ny fonosana, toy ny punctures, dents na harafesina.
Miroborobo amin'ny fiainana Freeze Dried Foods no tranonao lavitra ny trano.
Fandinihana ireo fivarotana sakafo hafainganana hafa
Ity dia iray amin'ireo orinasa fitehirizana sakafo tsara indrindra satria manangona tsiro be dia be ary manome ny akora ilaina rehetra hanomanana sakafo amin'ny kalitao mety indrindra. Ity orinasa ity koa dia manana safidy mahavariana ho an'ireo mankafy mihinana sakafo tsy misy gluten sy legioma, ary mitazona ny vidiny ambany ho an'ny akora la carte, noho izany dia manana fotoana hijerena ianao raha mampiasa vola tsara ny fividianana sakafo sasany. ho tahiry. sakafo maharitra.
Fambolena sakafo augason Farms
Augason Farms dia manolotra fifangaroana ilaina amin'ny singa ilaina, toy ny lasopy, voankazo maina maina, tsaramaso, misotro mifangaro, sy legioma. Ny rano fisotro sy ny sivana rano fisotro dia tsy hita ao amin'ny safidinao. Ny fananana sakafo velona velona betsaka dia tsara, fa raha tsy misy rano madio na mafana dia be dia be ny zavatra ilaina rehefa tampoka. Emergency Essentials dia serivisy manome vahaolana amin'ny famatsian-drano amin'ny safidinao sakafo.
Raha mikasa ny hitoby ianao na mila an'io sakafo io mandritra ny fotoana fohy, tsara kokoa ny mifidy sakafo voaomana mialoha amin'ity magazay ity – raha tsy hoe mieritreritra ianao fa afaka mahazo kapoaka vovo-dronono 52-ons amin'ny zavatra tsy misy. ny fotoana. Azonao atao ny mividy kaontenera fitehirizana entana lehibe kokoa noho ny sakafo ampy haharitra taona vitsivitsy, fa misy safidy ho an'ny toe-javatra fohy ihany koa.
Ity serivisy ity dia manolotra fifangaroana ilaina ilaina lehibe toy ny lasopy, voankazo maina maina, tsaramaso, misotroa mifangaro sy legioma. Ny rano fisotro sy ny sivana rano fisotro dia tsy hita ao amin'ny safidinao. Ny fananana sakafo velona velona betsaka dia tsara, fa raha tsy misy rano madio na mafana dia be dia be ny zavatra ilaina rehefa tampoka.
Fitehirizana sakafo hendry
Kitapo vonjy taitra na fahavelomana dia tsy maintsy misy sakafo. Tsy ny sakafo hafa ihany, fa amin'ny ankapobeny, sakafo velona velona maina be dia be izay mety amin'ny toe-javatra iainanao. Iray amin'ireo orinasa fanta-daza indrindra amin'ny fanamboarana sy fivarotana sakafo efa vita mialoha ho an'ny tanjona vonjy maika dia ny Wise Foods, Inc..
Betsaka ny olona milaza fa ny Wise Foods no manome ny fahavelomana tsara indrindra, vonjy taitra, ary sakafo mitoby eny an-tsena, ary noho ny antony tsara. Tsy toy ny sakafo hafa mitovy karazana aminy, Ny sakafo hendry dia mihamangatsiaka maina no mora vidy indrindra. Ankoatry ny, fonosina ao anaty kitapo feno volo, koa azo entina sy maivana be izy io, manana tsiro lehibe, ary misy karazany maro.
Ny sakafo velona dia tsy tokony hanimba mora foana mba hitehirizana maharitra. Wise Foods dia manana 25 taona talantalana!
Ny vokatra Wise Foods dia tonga amina fonosana na kitapo azo alaina ihany koa, izay tehirizina be avy eo, siny plastika matanjaka. Mazava ho azy fa entina ireo siny ireo, na ho an'ny zaza aza, mba hahafahanao sy ny zanakao mitondra ny sakafo mandritra ny iray volana na roa.
Ny siny dia ho mora ampiasaina amin'ny zavatra hafa koa, toy ny mihady sy manary fako. Plus, ny fanambanin'ny kaontenera tsirairay dia miendrika mba hiara-hidina rehefa mifatotra, noho izany dia tsy mandray toerana be ao amin'ny lakaly izy ireo, trano fanatobiana entana, na na aiza na aiza kasainao hapetraka. sakafo velona omen'izy ireo.
Rehefa mividy vokatra Wise Foods, afaka misafidy ianao eo amin'ny sakafo maraina, safidy atoandro sy sakafo hariva, ary koa ny legioma maina mihintsy, voankazo sy hena.
Ny sasany amin'ireo safidy sakafo maraina gourmet dia misy granola mangatsiaka, Koba isan-karazany, sy kanelina paoma. Ny safidinao hisakafo hariva sy antoandro dia misy sakafo matsiro sy manaitaitra toy ny pasta Alfredo, sakay na makaroni sy fromazy, rotini, tortillas na lasopy basilika voatabia, stroganoff sy teriyaki misy vary. Mora be ny manamboatra ny vokatr'izy ireo. Ny sasany amin'ny sakafonao dia tsy mila rano mangotraka fotsiny ary aorian'izay 12-15 minitra dia ho vonona ny sakafonao.
Ny fitehirizan-tsakafo hendry dia tsy voatery hiafara amin'ny fiovan'ny loza. Azonao atao ihany koa ny mihinana ireo sakafo vonjy taitra voatahiry amin'ny fotoana ilanao sakafo haingana na ny fianakavianao, fa reraky ny mahandro loatra.
Ny sanda ara-tsakafo sy ny tsiron'ny vokatra Wise Foods dia azo antoka fa mahasolo ny sakafo an-trano. Plus, raha mitahiry ireo karazan-tsakafo ireo ianao, ho vonona amin'ny olana ara-toekarena hitranga amin'ny ho avy koa ianao.
Ny fitazonana sakafo vonjy maika dia hanome antoka fa ho voky sakafo tsara foana ny fianakavianao mandritra ny fotoanan'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fahasahiranana ara-bola.
Ny trano an-tendrombohitra dia mangatsiaka ny sakafo maina
Sakafo any an-tendrombohitra, manomeza sakafo maina-maina mandritra ny fotoana voafaritra, ny sakafo vonjy taitra rehetra dia tokony ahitana fitambaran'ny proteinina, gliosida, ary tavy. Raha manangona ny tahirin-tsakafonao manokana amin'ny entana ao amin'ny magazay ianao, mety ny mifantina hena sitrana sy am-bifotsy, voankazo sy legioma, mofomamy, voa, sy rano. Tsy maintsy misy ny fisokafan'ny boaty sy ny loharanon'ny hafanana, toy ny fatana na fatana elektrika.
Ity kitapo fisakafoanana ao an-tendrombohitra ity dia misy sakafo maraina telo, legioma lafiny telo, ary fonosana enina 10-ounce an'ny sakafo antoandro na sakafo hariva, sakafo ampy ho an'ny olon-dehibe iray mandritra ny telo andro. Blueberry sy Ronono Granola, Bacon atody miady, Atody mikorontana Ham sy Pepper, Garden Green Peas, Voam-bary manontolo, Hetezo tsaramaso maintso, Beef Stroganoff, Akoho Teriyaki, Chili mac miaraka amin'ny hen'omby, vary sy akoho, paty lohataona, ary henan-kisoa mamy sy marikivy miaraka am-bary. Ireo sakafo azo vonjy maika rehetra ireo dia azo omanina mora foana amin'ny toe-javatra sarotra amin'ny alàlan'ny fampidirana rano sy fananana fito taona. Mpanjifa afa-po Christopher Coakley avy any Santa Barbara, Kalifornia. nanao hoe:, “Amin'ny ankapobeny ny sakafon'ny Mountain House dia matsiro kokoa noho ny ankamaroan'ny fomba fanamainana maina.
Ny fananganana tahirin-tsakafonao manokana dia mety amin'ny toe-javatra izay ilanao ny manalavitra tsy miankina mandritra ny roa herinandro. Raha tsinjovinao fa ny vokatr'izany, mandinika kitapo fitahirizana sakafo maika. Misy boaty sy kitapo misy sakafo mangatsiaka sy tsy ampy rano afaka manampy anao sy ny fianakavianao mandritra ny iray volana ka hatramin'ny herintaona. Heverina ho MRE, ireo kitapo ireo dia misy fitambarana sakafo sy kojakoja tsirairay izay azo omanina miaraka.
Sakafo fahaveloman'ny trano an-tendrombohitra
Sakafo any an-tendrombohitra 10 kitapo sy kapoaka, rano mangatsiaka ihany no mila hydrate tanteraka. Rehefa mila mandany ny tahirin'ny sakafo vonjy maika ianao, tsarovy fa ny tsirairay 10 efajoro – sahala amin'ny haben'ny galona – tokony haharitra iray volana fotsiny. Tsy tokony hatao anaty vata fampangatsiahana na inona na inona amin'ireo sakafo ao anaty kitapo ireo. Fanampin'izany, kit iray dia mazàna misy kaloria efa voafaritra izay ho laninao raha manaraka ny soso-kevitra momba ny fatra voalaza ianao.
Ny fiomanana amin'ny sakafo an-tendrombohitra ampy ho an'ny sakafo maina dia hanampy anao sy ny fianakavianao amin'ny fotoan-tsarotra. ihany koa, kitapo sakafo maika dia tokony hampiana famenon'ny vitamina sy mineraly, satria tsy afaka mihinana voankazo sy legioma be loatra ianao mandritra ny fotoana voina sy fanarenana.
Raha vantany vao manana programa fitahirizana sakafo maika, atombohy amin'ny fanaovana lisitra mora amin'ireo zavatra ampiasain'ny fianakavianao isan'andro – zavatra mety ilainao rehefa maika; toy ny sakafo ankafizinao & zava-pisotro, vitaminina & fanafody, akanjo mafana & kiraro, bodofotsy, vatoaratra, labozia, vola fanampiny, fomba hafa hanafanana ny sakafo na ny rano, radio mandeha herinaratra & jiro, sns. Noho izany, miomàna ho amin'ny toe-javatra vonjy taitra, ary mifalia manao azy. Miaraha miaina amin'ny fiainana, ho faly tokoa ianao nanao izany.
← Teo aloha Paositra
Manaraka Paositra →
Leave a Comment Hanafoana ny valiny
Hiroborobo ny vokatra maina
Voankazo maina maina
Fihinana legioma maina ny hatsiaka mahasalama
Fangatahana ronono maina - Ronono, Cheese, Krema marikivy
manala hena maina & proteinina
Snackies mahasalama sy matsiro
Fisotroana Ruvi mahasalama sy mahasalama
Voankazo Crispy sy Snacky Crispy